Afrika : Afrikana Mitantara An’i Afrika · Global Voices teny Malagasy
Afrika : Afrikana Mitantara An'i Afrika
Voadika ny 13 Novambra 2011 13:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, srpski, русский, عربي, English
Afrika : Inona ny tantaranao ? dia ilay tetikasa farany tontosain'nyA24 Media. Natao izany hanasongadinana ny olana iraisan'ny Afrikana sy hampiroboroboana ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra. Tamin'ny alalan'ny dinika an-tserasera no ahafahan'ny Afrikana mifanakalo hevitra sy mamaha olana ao amin'ny Afrika: Inona ny tantaranao? Ankoatra izany, manome sehatra iray ho an'ny Afrikana hitantarany ny fiainany ho an'izao tontolo izao ilay tetikasa.
Nanaiky niresaka tamin'ny Global Voices Online momba ity tetikasa ity i Asif Sheikh, ilay Filoha Tale Jeneraly sady mpiara mamorona ny A24 Media.
Ndesanjo Macha (NM) : Afaka lazainao anay fohifohy ve ny momba anao ?
Asif Sheikh (AS) : Izaho dia taranaka Keniana faha 5, saingy 20 taona niainana tany ivelany. Io no nidirako voalohany amin'ny serasera fa efa mpandraharaha nandritra ny taona maro aho.
Asif Sheikh, mpiara-mamorona sady PDG ao amin'ny A24 Media
NM: Inona marina ilay “Afrika: Inona ny tantaranao ?”
AS : Afrika :inona ny tantaranao ? dia sehatra mitodika kokoa amin'ny mpisera hampiroboroboana ny fangaraharana eto Afrika sy haha-tompon'andraikitra ny tsirairay mbamin'ny fikambanana isan-karazany.
NM : Ahoana no nipoiran'ilay hevitra?
AS : Niainga avy amin'ilay foto-kevitra hoe mivelatra i Afrika, na ny olona na ny firenena. Firenena 55 no mandrafitra an'i Afrika. Anarana mitovy no iantsoana anay dia ny hoe : AFRIKANA. Kanefa ny tena marina dia tsy mifankafantatra akory izahay amin'ny lafiny maro miainga amin'ny ara-kolotoraly ka hatramin'ny ara-tsakafo sy ara-politika sns. Ny zavatra tiany atao dia ny hanao izay hahatonga ny Afrikana hifampiresaka ny momba azy sy hifankahazo. Mba ahafahana manao izany anefa, mila mitady zavatra iraisana isika, zavatra mampiray antsika amin'ny maha kaontinanta sy maha olombelona antsika. Ny zavatra hita tamin'izany dia ny hoe mitovy ny OLANA. Avy eo tsy maintsy nosokajiana ny olana ary nofantarina ny vaovao ananana. Izay no nipoiran'ilay hoe Afrika : Inona ny tantaranao?
Ny hevitra izany dia ny hanasongadinana ny olana iraisantsika sy ny hanao izay hifankahazoan'ny Afrikana bebe kokoa sy ny hifaneraserana ary koa hifampizarana ny olana any amin'ny firenena misy azy avy. Ao India, ohatra, satria firenena iray ihany io, misy ny sampan-draharaha ahafahana mampita ireny fampahafantarana ireny. Araky ny fantatsika moa dia tsy misy toy izany aty Afrika, tsy misy noho izany olona na toerana ahafahany mizara ny tantarany sy ny olona hihaino azy.
Afrika : Inona ny tantaranao?
NM : Ahoana izany no atao mba ho re tokoa ny Afrikana sy ny tantara iainany?
AS : : Mazava ho azy fa mampiasa ny sehatray manokana izahay mba hanomezan-danja izany ary raha hifaoka izany izahay dia mety hitarika Afrikana an'hetsiny hifampizara sy hifankahalala vaovao. Amin'ny alalan'io irery ihany no hanantenanay fa ahafahanay mahatratra ny karazana vahaolana sasantsasany. Ny Ganeana iray dia afaka ny hilaza hoe manana harena tahaka izao aho ka izao no nanampy ahy na hoe izao no nampihena azy. Ny keniana iray dia mety hahita izany tantara izany ka handeha amin'iny lalana iny .
Kanefa araka ny fantantsika, ny foto-kevitra ijoroantsika miaraka amin'ny lasitrantsika rehetra dia i Afrika mila manajànona ny fandraisany ny fanampiana tahaka ny Fanampiana amin'ny alalan'ny lasitra fifampiraharahana izay tsy mety amin'ny Afrika. Jereo ny tsy fahampian-tsakafo izay mbola misy hatramin'izao. Efa ho 25 taona aty aorian'ny tsy fahampian-tsakafo nitranga tao Etiopia. Koa dia mila maka ny tena tantaran'ireny mponina ireny isika ka mandefa izany amin'ny alalan'ny filazam-baovaontsika izay ahitana mpifandray 5000 mahery mba ampisehoana ny olantsika ary hanampy ireny mponina ireny ahitany fidiram-bola. Izay no fandikanay ny fanaovan-gazety amin'ny mponina .
Fango ofisialy ny Afrika : Inona ny tantaranao?
NM : Manana ohatra ve ianao amin'ny mety hampandeha io lasitra io?
AS : Mamelà ahy ianao hanome ohatra iray. Andro vitsy lasa izay dia naharay sary avy any Nigeria izahay mampiseho polisy manao kolikoly. Ampiasainay io sary io amin'izao ary anontanianay ny avy amin'ny firenena hafa raha misy mitovy amin'izany koa any. Amin'izany dia safidianay ny 5 tsara indrindra, ampiasainay ny zavatra eo am-pelatananay satria moa izahay ihany no manao ny fandaharanay ao amin'ny AFRICA JOURNAL(na vaovaon'i Afrika) ho an'ny Reuters ary manakambana tantara 3-5 minitra mikasika ny kolikoly misy eo amin'ny polisy ao Afrika. Tsy misy olona mampiseho ny tantaran'i Afrika toy izany. Mino izahay fa hisy hividy io tantara io, ka ahafahanay manome falim-po hoan'ireo olona 5 ireo.
Matetika, ny zavatra rehetra izay tonga dia jeren'ny sampana fanoratana ao aminay, avy eo izay afaka amidy dia atokana ary amidy amin'ireo filazam-baovao famatsiany tahirin-kevitra. Izay olona nanao fanadihadiana dia ahazo falim-po noho izany varotra izany ..
NM : Azoko izao fa iray amin'ireo tanjon'ilay tetikasa ny hanao izay anombohan'ny samy Afrikana hifanerasera. Misy firenena 55 ao Afrika izay mampiasa ny fiteniny avy, ahoana no ahafahanao manala ny sakana eo amin'ny teny raha amin'ny teny Anglisy ihany ny zavatra hita ao?
AS Atombokay amin'ny fiteny Anglisy aloha ary arakaraky ny fitombon'ny fangatahana dia hisy amin'ny fiteny hafa ny vohikalany rehetra sy ny lasitray. Mieritreritra ny Frantsay, Swahili ary Arabo izahay .
Lahatsary manaraka : Afrika : Inona ny tantaranao?..'Feo Afrikana Mitantara Tantara Afrikana
NM: Moa ve ianareo mihevitra ny ampiasa io sehatra io mba ho toerana iray hiresahan'ny mponina amin'ny mpitondra azy sy ny mpanao politika ao aminy? Raha eny, ahoana no anaovanareo izany?
AS : Sehatra ho an'ny Afrikana REHETRA hiresahana momba ny resaka heverin'izy ireo fa zava-dehibe ary miaraka amin'ny fanantenana fa haneho hevitra sy hifanoro hevitra koa ny samy Afrikana .
NM : Misy lohahevitra ve izay mety handrisika ny Afrikana hifampiresaka ?
AS : Eny, misy tokoa ary ny fitovian'ny olana izany
NM : Karazana votoaty toy inona no ekenareo?
AS : Ekenay ny lahatsoratra, raki-peo, Lahatsary ary Sary.
NM : Iza ny olona miandraikitra ny tetikasa amin'izao fotoana izao?
AS : Ataon'ny A24 media daholo izany miaraka amin'ireo mpiara-miasa izay manohana anay miaraka amin'ny “data”
NM : Ankoatra izay, inona ny tantaran'ny vohikalanareo, inona ny filazeam-baovao ara-sosialy hafa ampiasainareo mba anosehanareo ny rakitra anaty aterineto ?
AS : Manao izay ampiasàna ny tambajotran-tserasera araka izay tratra izahay toy ny Twitter, Facebook ary YouTube.
NM : Inona no resaka mbairianao ho resahin'ny olona ao amin'ny Afrika : inona ny tantaranao ?” vohikala?
AS : Ny olantsika : kolikoly, harena, fampianarana sy fitantanana.
Ity lahatsary manaraka ity : Farah Chaudhry, Ilay talen'ny varotra ao amin'ny A24 Media eo am-pandefasanany Afrika : Inona ny tantaranao? :
NM : Inona izany ny zavatra vitan'ilay tetikasa hatramin'izay?
AS : Nahavita nampandroso sehatra maro ihany izahay ka..
1. Ny tantaran'ny mponina afrikana dia efa naboraka tamin'ny maro tao amin'ny vohikalanay sy mpiara-miasa.
2. Maro amin'ny mponina no mianatra, mifampizara ary ny sasany mandefa ny tantarany manokana.
3. Mampiasa ny filazam-baovao izahay mba hanomezan-danja sy hanao izay hahenoana ny tantaranay. Manome sehatra iray ho an'ny Afrikana rehetra izahay mba ahafahany mifampiresaka.
4.Manana hevitra hafa ihany koa izahay toy ny fanomezana loka, vatsim-pianarana ho an'ny fianarana fanaovan-gazety ho an'ireo mpianatra mahay.
Mihevitra izahay fa eo aminà zavatra ngeza be amin'izao fotoana izao. Kanefa amin'ny tetikasa lehibe tahaka itony dia mila fanampiana izahay. Misaotra.
Nanamarika ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety tany Mozambika ny tahotra sy ny tsy fandriampahalemana
Mozambika 17 ora izay
Angola 4 andro izay
Angola 1 herinandro izay